ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचितभए संगै सर्वाधिक धनीबाट ३५ स्थान ब्याक ! – Arthatantra.com
ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचितभए संगै सर्वाधिक धनीबाट ३५ स्थान ब्याक !
फोब्र्स म्यागजिनले व्यापारिक व्यक्तित्वका रुपमा खडा गरेको अमेरिकाका हालै निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सम्पत्ति करोडौंले खस्किएकोछ । सम्पत्तिमा घाटा आएसँगै उनी १२१औं सर्वाधिक धनी व्यक्तिबाट १५६औंमा झर्न पुगेका छन् ।
आफै बनेको र्यांकमा फोब्सले उनलाई ५औं नम्बरमा राखेको छ । ७० वर्षे ट्रम्पसँग अझै पनि ३ दशमलव ७ विलियन अमेरिकी डलर सम्पत्ति रहेकोछ ।
धेरैले भन्ने गर्छन् कि ट्रम्प आफै बनेका धनी हुन् तर यो भनाईको बिरोध गर्दै धेरैले उनलाई रियल स्टेटका व्यापारी उनका बाबुको कारण नै उनी अमेरिकाका धनीहरुको पंक्तिमा उभिन पुगेको बताउँछन् ।
सन् २०१५ मा मात्रै उनी प्रभावशाली व्यक्तित्वको लिस्टमा ७२औं नम्बरमा थिए ।
ट्रम्प आखिर कसरी धनी भए त ? ट्रम्पका पिता फ्रेडरिक ट्रम्प व्यापारमा रुचि राख्ने व्यक्ति थिए । समयसँगै उनले होटल व्यवसाय र रियल स्टेटको व्यापार गरे । यसले उनलाई सफलता दियो । जब उनको निधन भयो त्यतिबेला उनले ३ सय मिलियन डलर छाडेर गएका थिए । सन् १९६८ मा जब डोनाल्ड ट्रम्प मात्र २२ वर्षका थिए, त्यतिबेला नै उनले व्यापार व्यवसायमा हात हाले । तर आफ्नो बाबुले जे जोगाएका वा चलाएका थिए त्यसलाई संचालनमा मात्र गर्नुको साट्टो ट्रम्पले म्यानहाटन रियल स्टेटमा लगानी गरे । जुन कम्पनी पछि सन् १९८० मा गएर ट्रम्प अर्गनाइजेशनका रुपमा परिचित हुन पुग्यो ।
यसबाट आर्जन भएको पैसा उनले फुटबल टिम, ब्यूटी पेजेन्ट, टेलिभिजन कार्यक्रम र फेशन लाइन आदि किन्नमा खर्च गरे । जसले उनलाई चर्चासँगै पैसा पनि प्रशस्त कमाउने मौका दियो । उनले पछि ऋण लिएर उनले ठूलो लग्जरी होटल, अपार्टमेन्ट र क्यासिनोको निर्माण गरेका थिए ।
अहिले ट्रम्प आफूसँग १० विलियन डलर सम्पत्ति भएको बताउँछन् तर अर्थविद्हरु उनीसँग मात्र ३ दशमलव ५ विलियन डलर सम्पत्ति रहेको बताइरहेका छन् । फोब्र्सले पनि यही आँकडालाई मान्यता दिएको छ ।
२ मंसिर २०७३, ७ : ३०
नाम परिवर्तन संगै अरुणले ५४ करोडको हकप्रद जारी गर्ने, कती पुग्छ पुँजी ? काठमाडौ । अरुण फाइनान्स कम्पनीले नाम परिवर्तन गर्ने भएको छ । अरुण फाईनान्स लाई परिवर्तन […]
हाईड्रोको ९६ करोड ६१ लाखको आईपीओ आउदै, कहिले र कसरी गर्ने खरिद ? काठमाडौ । युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपिओ) जारी गर्न प्रस्ताव गरेको छ […]
भर्नुहोस आवेदन, लघुवित्तको ३ करोडको आइपीओ बजारमा काठमाडौं । सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ३ करोड रुपैया बराबरको साधारण शेयर […]
के तपाईलाई थाहा छ ? फाईनान्सको २८ करोड ६७ लाख बढीको हकप्रद आउदै काठमाडौ । श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनीले २८ करोड ६७ लाख रुपैया बराबरको हकप्रद […]